Ogwu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ihe niile ị chọrọ ịma maka ịkụcha akwụkwọ nri
Akwụkwọ nri bụ ihe oriri nke nwere ọtụtụ vitamin digestible, organic na fatty acids, micro- na macronutrients dị mkpa maka nri dị mma. Elu ndị a bara uru ma na-achọsi ike na tebụl ọ bụla. Iri ahihia mgbe nile bu ihe ngbochi di nma nke oria nke digestive, egwu, obi mmadu, oria ajuju nke oma, na-egbochi nsogbu.
Parsnips na-eto eto na mba ahụ: kụrụ osisi ma na-elekọta ubi
Pasternak bụ ihe oriri, ọ bụghị naanị na ọ tọrọ ụtọ, ma ọ bara uru. Otú ọ dị, nsị ya na bed bed nwere ọtụtụ ụzọ aghụghọ, na-enweghị nke ọ gaghị ekwe omume inweta nnukwu mkpụrụ. Ọ bụ maka nuances ndị dị na nsị nke parsnips, anyị na-akọwakwa n'okpuru ebe a. Ntucha parsnips maka seedlings Ihe e ji mara nsị nke parsnips na mba ahụ na-adabere n'ụdị akwụkwọ nri dị ka ogologo oge na-eto eto.
Kohlrabi Vitamin Bomb: Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Banyere Ịkụ na Nlekọta
Ụdị ụdị a si Sicily bịa. Na-enwe obi ụtọ na-ewu ewu na Western Europe na Turkey. Ndị na-elekọta ubi maara otú e si eto kabeeji kohlrabi, n'ihi na a na-ewere ya na ọ bụ vitamin bombu na karịa ndị ikwu ya ọzọ na uto. Banyere Kohlrabi Kohlrabi bụ kabeeji mbụ, nnukwu kabeeji na-ekwenye ekwenye.
Nematode umu na usoro ichikota
Nematodes so n'ime pests ndị kachasị njọ. Ọ bụghị nanị na ha na-ebute ọrịa, ọnwụ nke osisi, ma ọ pụkwara imebi ahụ ike ụmụ mmadụ, ụmụ anụmanụ. N'isiokwu a, anyị ga-elele ụdị nematodes na ihe ọ bụ, yana inye ndụmọdụ dị iche iche banyere otu esi alụ ọgụ nematode n'ogige.
Kedu ihe ụmụ nnụnụ na-eri n'ime ubi na n'ụlọ ezumike ha, n'ọhịa na n'ọhịa
Mkpụrụ, tinyere shrews na hedgehogs, bụ nke iwu nke ụmụ ahụhụ. Ha na-ebi na ebe mmiri ma ọ bụ ala mmiri na-adịghị asọ oyi mgbe niile - na ala ahịhịa juru, na floodplains nke osimiri, na n'akụkụ nke deciduous na agwakọta ọhịa. A na-emekarị mkpịsị ugbo n'ogige anyị ma ọ bụ n'ubi anyị. Ebe ọ bụ na ebe niile, e nwere ala a tọhapụrụ site na-egwu ala, na-ekpuchi ya na earthworms, ma na-egwu ala n'ala iji hụ na ị ga-anọdụ na ebe a na-achụ nta.
Esi enweta otu òké: a na-esi na karama plastic
Ọ bụrụ na a na-eri anụ ntanye n'ụlọ, ụlọ ma ọ bụ ụlọ ndị ọzọ, ọ dị gị mkpa ikpochapụ ha. Ụmụ oke nwere ike ịkpata nnukwu nsogbu na ebuka nri, ihe nkwata, ghọọ ihe na-esi ísì ụtọ na ọrịa. Isiokwu ahụ na-akọwa ọtụtụ ụzọ isi jiri aka ha na-eme ka muteraps si ihe ndị dịnụ.
Ezumike oyi: otu esi emeso pesti n'ime ubi
Ịkwadebe ubi mkpụrụ osisi maka oge oyi aghọwo ihe dị ezigbo mkpa maka ndị ọrụ ubi na ndị okpomọkụ, nke a ghaghị ime n'oge oge mgbụsị akwụkwọ iji mepụta ọnọdụ kacha mma ma chebe maka mkpụrụ osisi na osisi oyi na-aga nke ọma. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka mkpụrụ osisi osisi, nke kachasị emetụta ọnọdụ ọjọọ nke ebe oyi.